Fire Na Cairo's Ramses Main Train Station! Nanị 25 Nwụrụ Anwụ!
A na-akụ ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Ramses, nke dị na Cairo, bụ isi obodo Egypt, ka ọ na-aga n'ihu ngwa ngwa. Mgbe okuku ahụ, ọ dịkarịa ala, 25 gburu na 50 merụrụ ahụ. Dabere na mpaghara ebe mgbagha [More ...]
Casaplanca Tramway 2. Ịbanye nwa oge nke Usoro Nweta
Casablanca Tramway, ebe ọ bụ na Yapı Merkezi, 2 na-arụ ọrụ niile na ikuku. Edere akwụkwọ nkwado nke usoro ntinye aka dị ka 23 nke a na-ede na November 2018. Ngwongwo 16,5 kilomita abụọ tramway, 1 ụlọ nkwakọba ihe [More ...]
GEFCO nwetara ndị na-ebu ozi PSA na-akwado New Kenitra Facility na Morocco
Site n'inweghi nkwekorita nke akuko ngwa ahia na ihe di iche iche di iche iche, GEFCO mere ugbo mbu 2018 ugbua na December 2 iji kwado osisi ohuru PSA Group na Kenitra, Morocco. Ogwe 2019 na njedebe nke 45 karịa Saint Nazaire na France [More ...]
Imepe nke Line nke Abụọ Casablanca Tram
Ihe mmalite nke usoro nke abụọ nke Casablanca Tram 23 Na Jenụwarị 2019, Eze nke Morocco VI. Ọ bụ Muhammad mere ya. Ntọala okporo ígwè 16,5 kilomita abụọ, usoro 1 nke ụlọ nkwakọba ihe [More ...]
A na-emeghe ụzọ ụgbọ okporo ígwè nke mbụ na Senegal na otu amachi Turkey
West African mba nke Senegal isi obodo, Dakar, inyịme Blaise Diagne International Airport site n'etiti obodo na a Turkish ike Yapi Merkezi na COMMUTER okporo ígwè edoghi ebu Yapıray na mbinye aka nke President na-eguzobe Salle isonye. Okpu nke isi obodo Dakar [More ...]
Na-azụ ụgbọelu na South Africa, 4 Nwụrụ Anwụ 600
Ndi mmadu 4 tinyere ndu ha na ugbua ụgbọ ala na-eme na Republic of South Africa, ndi mmadu noo na 600 meriri. Dị ka ihe ọmụma ndị ọchịchị nyere si dị, na nso obodo Pretoria mmadụ abụọ 4 nwụrụ n'ihi nkwekọrịta nke ụgbọ okporo ígwè ahụ, otu n'ime ndị 600 dị arọ merụrụ ahụ. Ụgbọ okporo ígwè [More ...]
M Dream Railway "Ihe Nkiri Painting na Yapı Merkezi, Tanzania
Building Center Darüsselam- Makutupor Iron Road Project e mezuru na ihe ịga nke ọma nke a na oru ngo akporo nke-elekọta mmadụ ọrụ na oru ngo. Karịsịa DSM ngo bụ ịghọta echiche iji meziwanye nkwurịta okwu na ụmụ na ụlọ akwụkwọ gburugburu ebe obibi "My nrọ Railroads" kwuru ẹkedọhọde [More ...]
ERC si New CEO na-eleta AKH Railway Project
ọhụrụ họpụtara CEO nke ERC ozi Sentayeh na Woldemicheal na ya ERC Mission, Structure Center Deputy onyeisi oche Erdem Arıoğlu, East Africa Regional Director Abdullah Kilic, AKH Project Genghis Erhan Project Manager na Construction Project Management [More ...]
Yapı Merkezi malitere TRC ọrụ Ọzụzụ na Tanzania
maka ọzụzụ nke Yapi Merkezi TRC mkpara, mbụ na ngwugwu nke ọzụzụ ka a mere dị ka nkwekọrịta na o mewo ka ya na TCDD - General Railways agụmakwụkwọ, na 26 November 2018 na Tanzania Transport Minister Isack A. Kamwelwe òkè [More ...]
Mbụ na-aga na Senegal TER Project Erute
Ụgbọ okporo ígwè mbụ si na obodo Dakar dị na Ọdụ Ụgbọ Mmiri Blaise Diagne dị n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ụgbọ okporo ígwè nke nwere ụgbọala anọ nwere ogologo oge 72 m, 400 nke nwere ike ịnọ, gụnyere ndị njem mbụ na nke abụọ. Construction Site [More ...]
Ụgbọ njem ụgbọ elu ụgbọ elu nke ụgbọ okporo ígwè na-aga na Afrika na 37
Transport na Infrastructure Minister M. Cahit Turhan, "Turkish Airlines (-gi), 30 November Gambia isi obodo Banjul on, 12 Na December, Zambia isi obodo, na ọtụtụ mba ndị na-ejedebe na Africa ya na ndokwa flights ga ẹkedori na Lusaka xnumxy ka ọnụ ọgụgụ nke obodo xnumx` ka [More ...]
A na-agba ụgbọ okporo ígwè ahụ na Congo, 18 anwụwo
N'ihi nkedo nke ụgbọ okporo ígwè na Democratic Republic of Congo, ọ dịkarịa ala, e gburu 18 na 25 merụrụ ahụ. Onye ọnụ na-ekwuru ọchịchị obodo bụ Kingombe Kitenge Benoit, nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ, na-ebuga ụgbọ okporo ígwè n'ebe ndịda obodo Lumbashi [More ...]
Apaydın, ndị ọrụ Railway Sudan na-esonye na Ememme Akwụkwọ Ọzụzụ
28 / 10 / 2018 Levent Elmastaş Abudin, Sudan Railway Ndị ọrụ na-aga na Ememme Ndenye Ọzụzụ yorumlar kapalı
TCDD General Manager İsa Apaydın; 25 October 2018 gara na Sudan Railway Staff Training Ceremony na Thursday. Na mgbakwunye na General Manager Apaydın, Nzuzo Tarig Ahmed Mohamed Salih, Ụgbọ okporo ụzọ Sudanese (SRC) [More ...]
10 Nwụrụ Anwụ, 100 Na-ata Ahụhụ Na-azụ Ọkụ Minimum Dị na Morocco
Egburu ụgbọ okporo ígwè abụọ na nso Rabat, isi obodo Morocco. 10 merụrụ ahụ na ihe omume ahụ, ma ọ dịkarịa ala, ndị mmadụ merụrụ ahụ 100 ahụ na ọkwa ahụ. Otu nnukwu ụgbọ okporo ígwè mere na Rabat, isi obodo Morocco, North Africa. [More ...]
9 Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ. Soro na Central na East Africa Road na Ụlọ okporo ígwè Summit
Ụlọ Ihe Nlekọta, 9, nke mere na Dar Es Salaam na Tanzania ma nọrọ ụbọchị abụọ n'etiti 10-2018 October 9. Ọ kwadoro ma soro na Central na East Africa Road na Railway Infrastructure Summit. Mba dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ na n'Ebe Etiti Africa [More ...]
Akwukwo nke Export na Bursalı Makineciler
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmemme mmemme na-ahụ maka ụlọ ahịa na Bursa (UR-GE) n'etiti ndị ọrụ nchịkwa nke igwe na Morocco. Ụlọ ọrụ Bursa, 80'de nso ndị ahịa azụmahịa si mba ọzọ na 200'de nwere nnọkọ azụmahịa. BTSO Onye isi oche nke Board [More ...]